दाङकाे लखन पार्क निर्माणमा ढिलासुस्ती किन ? – नेपाली संगसार
दाङकाे लखन पार्क निर्माणमा ढिलासुस्ती किन ?
नेपाली संगसार calendar_today ६ चैत्र २०७७, 4:39 am
दाङ। घोराहीका मनिसा मगरकी छोरीले कतै घुमाउन लैजानुन भनेर भन्नु भयो । अनि उहाँले छोरीलाई नजिकैको लखन पार्कमा लैजाने सोच्नुभयो । तर उहाँले छोरीलाई जुन हिसावले पार्कमा घुमाउने सोच्नुभएको थियो । त्यो सम्भव भएन । उहाँले भन्नुभयो,-‘पार्कको स्तरबृद्धि गर्ने भनेर काम सुरु गरेको वर्षौ भएपनि अझै नसकिएको रैछ ।
कहिलो खाल्डो खान्ने कहिले सम्माउने यस्तै मात्रै हुन्छ, उहाँले भन्नु भयो । कुनै समय घोराहीकै ठुलो पार्कको रुपमा चिनिएको लखन पार्कको अहिले यो अवस्था देख्दा दुख लागेको भन्दै निर्माणको काम समयमै नसकिनुले पार्कको सौन्दर्यतालाई घटाएको बताउनु भयो ।
पार्कमा फुल होलान, बालबालिका खेल्ने ठाउँ होला, सुन्दरता होला भन्ने जुन आशाका साथ यहाँ नागरिक आउछन् । उनिहरु निराश भएर फर्किनु पर्ने जुन अवस्था छ । यसको छिटै अन्त्य होस्, उहाँले भन्नु भयो ।
यता घोराही १४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले माटो फिलिङ गर्ने, शौचालय निर्माण, फालमे रडको वरिपरी पर्खाल लगाउने काम उपभोक्ता समितीले सम्पन्न गरे पनि निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले कोरोनाका कारण काममा ढिला सुस्ती भएको बताउनु गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
उपभोक्त समितीमार्फत् घोराही उपमहानगरपालिकाको ४४ लाख रुपैयाको लागतमा माटो फिलिङ गर्ने, शौचालय निर्माण, फालमे रडको वरिपरी पर्खाल लगाउने काम सम्पन्न भैसकेको छ । यता निर्माणको जिम्मा पाएको विन्दु कन्ट्रसन प्रालीका सञ्चालक हरिवंश दाहालले कोरोनाका कारणमा काममा ढिलासुस्ती भएको र अव छिट्टै काम सम्पन्न गर्ने गरि सुरु गरिएको बताउनु भयो ।
२०७६ साल माघ महिनामा २०७७ को असार मसान्त सम्म सक्ने गरी सम्झौता भएको काम कोरोनाका कारण सम्पन्न हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको ५६ लाख रुपैयामा सम्झौता गरिएको लखनपार्कमा अहिले सम्म २८ लाख रुपैयाँको काम सम्पन्न भैसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अव बाकी २८ लाख रुपैया वरावरको काम गर्न बाकि रहेको र आगामी जेष्ठ महिनाको अन्त्य सम्म काम सक्ने गरी समय थप गरेर काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । निर्माण कम्पनीले ५५ प्रतिशत काम पुरा भैसकेको दावी गरेको छ ।
उपभोक्ता समितीमार्फत् ४४ लाख र विन्दु कन्ट्रसन प्रालीमार्फत् २८ लाख गरी अहिले सम्म ७२ लाख रुपैया वरावरको काम सम्पन्न भैसकेको छ ।